သံတွဲမြို့က လူဆိုးတွေ ၀ိုင်းပယ်ကြပါစို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Complaint / Claim » သံတွဲမြို့က လူဆိုးတွေ ၀ိုင်းပယ်ကြပါစို့
သံတွဲမြို့က လူဆိုးတွေ ၀ိုင်းပယ်ကြပါစို့
- win win 11 win win 11
Posted by win win 11 win win 11 on Aug 13, 2012 in Complaint / Claim, Hoax, Moderator, Myanma News | 18 comments
ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့မှာ 3.5.2012 နေ့ကညဖစ်ပွားခဲ့တဲ့အရေးအခင်းမှာ
သံတွဲမှ သတင်းပေးသူကတော့ ကျော်ကျော်(ခ) ထွန်းသန့်ကျော်(ခ)ပွကြီး(ခ)ပါလေရာ(ခ)
ဒီလူက ဘယ်ကားမှာ ကုလားဘယ်နှစ်ယောက်ပါသွားတယ်ဆိုတာကို တောင်ကုတ်ကိုသတင်း
29.4.2012 နေ့ကစပြီးတောင်ကုတ်မြို့ပေါ်မှာ သဟာရအသင်းမှစာတွေဝေ ဓါပုံတွေဖြန့်
လုပ်နေတာကို ဒေသအာဏာပိုင်တွေက ဟန့်တားခြင်းမပြုပဲ အခင်းဖြစ်လာသည်ထိကြည့်နေ
ပြီးတော့ သက်သေမရှိဟုဆိုကာ ရေငုံနုပ်ပိတ်နေကြပါတယ်
ပြောပြပါ့မယ် ပထမတရားခံက ကျောက်နီမော်က မော်တော်ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ပါ (နာမည်ရရင်တင်ပေးပါမယ်) ဆိုသူက ဒီခလေးမဓါတ်ပုံကိုအတင်းရိုက် ပြီးတော့ဆေးရုံမှာ
ပြီးတော့ ဒီလူကရန်ကုန်ကိုတက်သွားပါတယ် ရန်ကုန်မှာကွန်ပျူတာနဲ့ ပြင်ပါတယ် ပြီးတော့ဂျာနယ်မှာဖွပါတယ် သတင်းမီဒီယာတွေဆီပို့ပါတယ်
ပြောချင်တာက အဖြစ်ကျူးလွန်တဲ့တရားခံကိုတော့ အဲ့ဒီနေရာတင်သတ်ပစ်ရမှာပါ
ပြီးတော့အဲ့ဒီ ကျောက်နီမော်က မော်တော်ပိုင်ရှင်က တောင်ကုတ်မှာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ရောင်း
နေတဲ့ ကျောက်နီမော်ရွာသားဆိုသူဆီကိုဒီပုံတွေ ပို့ပြီး ဒီကိစ္စကိုလုပ်ခိုင်းတာပါ
အခင်းဖြစ်ပြီးညဖက်မှာဘဲ အဓိကပါဝင်သူလူ(30)ကျော်ကို ဒီလူက သူ့မော်တော်နဲ့ ရမ်းဗြဲကျွှန်း
ဦးဝင်းကိုလေး(ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ် တရားမ၀င်ရောင်းဝယ်ရေး)၊ ဦးဌေးအောင်(ဆိုင်ကယ်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး)၊ ဦးလှဝေ (စက်ချုပ်) ဆိုသူလေးဦးမှာ
သံတွဲမြို့ပေါ် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဗလီတွေနဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အိမ်တွေကို ခြောက်သလိုလို လှန့်သလိုလို နဲ့ ဓါတ်ပုံတွေလိုင်ပါတယ်
ပြီးတော့ကျိနတလီ ဘုန်းတော်ကြီးဆီသွားပြီးတော့ စည်းရုံးခြင်း၊ နယ်တစ်ချို့ကိုသွားပြီး
အဖျက်လုပ်ငန်းလုပ်ရန် သွေးထိုးလှုပ်ဆော်ခြင်း၊ နိုငံတော်သမတကိုထောက်ခံသလိုလို ဖား
ပြီးအလံထောင်ရန်စာတွေလိုက်ဝေခြင်း၊ (ဒီလူတွေကဘာကြောင့်ဖားနေရလဲဆိုရင် ဒီလူတွေယူထားတဲ့အမျိုးသီးတချုိ့က အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဘာ၊) (စကားညှတ်လေးပြောပြတာပါ) ပြီးတော့
မီးသင်္ဂြိုလ်စက်ကိုအကြောင်းပြုပြီး မီးကွင်းများပြုလုပ်ခြင်း၊ (ညမထွက်ရ)နိုင်ငံတော်သမတအမိန့်
ကိုဖီဆန်ကာ ကားတစ်စီးဖြင့်ညဘက်သွားလာနေခြင်း။ များပြုလုပ်နေပါတယ်
ဒါကိုဒေသအာဏာပိုင်တွေကလည်း သိရှိနေပါလျှက် တောင်ကုတ်မြိုဲ့ပြသနာကဲ့သို့
တရားဥပဒေစီုးမိုးရေးဆိုသည့် ဒို့တာဝန်တွေပျက်စီးနေမှာဖြစ်သည့်အတွက် နိုင်ငံတော်
အကြီးအကဲများ၊ တာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်းများမှ အောက်ပါဖုန်းနံပတ်တွေကိုဆက်သွယ်ပြီး
ဥက္ကဌ ခ.ယ.က 043.65224/ 09.49265118
ဥက္ကဌ မ.ယ.က 043.65217/65218
ခရိုင် ရဲမှူး 043.65244/ 09.49261186
About win win 11 win win 11
win win 11 win win 11 has written 1 post in this Website..
View all posts by win win 11 win win 11 →
မင်းpost ကို comment မပေးတော့ဘူးလိုကနေတာပါ။ ဒါပေမဲ့ မင်းရေးတဲ့အထဲမှာ ကျိန္တလီ ဆိုတာပါလာလို့ ရေးလိုက်တယ်။
“ကျိနတလီ ဘုန်းတော်ကြီးဆီသွားပြီးတော့ စည်းရုံးခြင်း၊”
ဆိုတော့ မင်းကအသေအချာသိပုံရတယ်။ ဘယ်ဘုန်းကြီးတွေဆီသွားတာလဲ။ ဘယ်ကျောင်းတိုက်တွေကိုသွားတာလဲ သေချာလေးပြောပြပါအုန်းကွာ။ ငါအဲ့ဒီဒေသကိုကောင်းကောင်းကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သိပါတယ်။ (သွေးထိုးလုပ်ဆော်မှုတွေမလုပ်ပါနဲတော့ကွာ အေးအေးဆေးဆေးနေပါ)
ဒါနဲ့ စကားမစပ် သံတွဲ ဈေးထဲက အမဲသားရောင်းတဲ့ မိန်းမ ကောသံတွဲမှာရှိသေးလားဗျ။ သူ့အကြောင်းလေးလဲနဲနဲထဲ့ပြောပါအုန်း။
တရားရေးမတိုင်ခင်.. ရှေ့က ပြောချက်တွေမို့.. မဟုတ်မှန်ခဲ့ရင်.. ဆိုင်ရာသူတွေ… အလွန်အန္တရာယ်များပါတယ်..။ နစ်နာနိုင်ပါတယ်…။
လောလောဆယ် ရွာသူားများပဲဖတ်လို့ရအောင်လုပ်ထားမယ်ဖြစ်ပြီး.. ကာယကံရှင်တွေက တိုက်ရိုက်ကန့်ကွက်လာရင်.. ပိတ်ပစ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း…
ဖျက်သင့်တဲ့ ပို(စ့်)တစ်ခုပါ သူကြီးရေ…
ဒါမျိုးတင်နေတာကို လက်မခံသင့်ပါဘူးဗျို့ ………………..
ဂေဇက်က ဟစ်တိုင်လိုလို… ပစ်စာပစ်တဲ့နေရာလိုလိုလုပ်နေကြတာကြာပီ…
သူရေးတာနှင့်ပဲ ၊ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူး ၊
ဟိုတစ်ယောက်တော့တော်တော် ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲ ။
ဒါကြီးက ပစ်စာ သက်သက်လို့ ထင်တယ်။ ဒီလောက် ဆိုင်ရာနာမည်တွေ တိတိကျကျ သိနေတယ် ဆိုရင် သက်သေ အနေနဲ့ ၀င်ပါလို့ ရနေတာပဲ..
ဟုတ်နေတယ် ဆိုရင်လည်း သက်ဆိုင်ရာ လူကြီးတွေကို ရှင်းပြဖို့သာ လုပ်ပါ။
ဒီပိုစ်ကြီးက မော်ဒရိတ်တာ မရှိ စစ်ဆေးရေး မရှိပဲ တင်လိုက်တိုင်း တက်တဲ့နေရာမို့ ဂေဇက် ကို အသုံးချ နေတဲ့ ဟာလို့ပဲ မြင်မိပါတယ်။
ကိုနာဂရရေ သံတွဲ ဇာတ်လမ်းတပုဒ်တော့တက်လာပြန်ပြီဗျို…….
တစ်ဖတ်မှာ အားလုံးအတွက် အသေအလဲကြိုးစားနေချိန်မှာ အသိဥာဏ်ခေါင်းပါးတဲ့ ကုလါးဘဲဖြစ်ဖြစ် ရခီးဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူမဆို သတ်ကြကွာ သေကြကွာ တကယ်လုပ်ရမည့်ဟာတော့ ဘယ်သူမှလါပြီး အသေမခံကြဘူး။
SkyHeart WinKo ရေ ရခီးဆိုတဲ့စကားကိုပြန်ရုတ်သိမ်းပေးပါ။ ရခိုင်လူမျိုးတွေအသည်းခိုက်အောင်နာတဲ့စကားမို့လို့ပါ။ ခင်ဗျားမြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် နားလည်ပေးပါ။ win win 11 win win 11 တင်ထားတဲ့ပိုစ့်မှာ အခြားအချက်တွေကိုတော့ စိတ်လဲမ၀င်စားပါဘူး ဒါပေမယ့် မီးသင်္ဂြိုလ်စက် အကြောင်းပြပြီးမီးကွင်းလုပ်တယ်ဆိုတာကြီးတော့ သိပ်သဘောမကျလှဘူး .. ။ ဒါဆို ဓါတ်ဆီဆိုင်ဖွင့်တဲ့လူတွေက မီးရှို့လို့လွယ်အောင် ဓါတ်ဆီစုထားတာလို့ပြောရမလိုဖြစ်နေပြီဗျ .. ။ တစ်မြို့လုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ မီးသဂြိုလ်စက်လေးကိုတော့ မဖျက်ဆီးပါနဲ့ဦးဗျာ .. ။ အခုမှ မြို့ခံတွေကြိုးစားထားသမျှ အကောင်အထည်ပေါ်ယုံလေးပဲရှိပါသေးတယ်။
မန်းဒလေး ဂဇက်ဆိုတာမဟုတ်တာတွေ မှန်းသမ်း ရမ်းရေးပြီး post တင် လှူံ့ဆော်တဲ့ site ကြီးဖြစ်နေပြီ။
ဒိပိုစ့်က ဖျက်သင့်ပါတယ် အန်တရယ်ရှိတယ်လို့ လည်းထင်ပါတယ်။
အမေရိကန်ကတောင် ရိုဟင်ဂျာကို ထောက်ခံမှုမပေးတဲ့အတွက်
ကဘာအရေးမှာ မှေးမှိန်သွားပြိဖြစ်လို့ပြန်စဘို့ အတွက် မိးမွှေးနေပုံရတယ်
ကျနော် ဒီစာကို Myanmar Muslim Net မှာစတင်ထားတာ ဖတ်ပြီးပါပြီ။ဒါဟာ သတင်းတပုဒ်ဆိုတာထက်
ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ တိုက်ခိုက်နေတဲ့ သဘောလို့ ယူဆပါတယ်။သို့ သော် ယခုပို့ စ်တင်သူကိုရော၊ဒီပို့ စ်ကို
ထောက်ခံဆွေးနွေးသူ အားလုံးကို ရှုံ့ ချလိုက်ပါတယ်။
သံတွဲသားကိုယ်တိုင်ရဲ့မှတ်ချက်ဖတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်… အသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့.. ပို့စ်ကိုပိတ်ပါမယ်နော….
ကောင်းတယ်ဗျာ သူကြီးရေ။တစ်ချို့ သူတွေ အတွက်ကြောင့် သူကြီးကို
ဒေသငြိမ်းချမ်းရေးကို အဲသလောက်တောင် အမှန်တကယ်လိုလားပါလျက်၊
ဒီအမှုမှာ ဒီလူ ဒီလူတွေ ပါဝင်တယ်ဆိုတာသိလျက်နဲ့ 
ကိုယ်တိုင်ဘာကြောင့် တာဝန်သိပြည်သူတစ်ဦးအနေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကို
သွားသတင်းမပေးဘဲ ဒီမှာဘဲလာတင်ရတာပါလဲ စဉ်းစားမိပါတယ်။
ပြောတဲ့အတိုင်း အမှန်တွေဆို ဘာကိုကြောက်လို့ အမှန်တရားဘက်က မရပ်တည်ပါသလဲ။
(ဘာသာတရားဆိုတာ လူသားတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ယုံကြည်ချက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အတွက် မျက်လုံးမှိတ်ပြီးမကိုးကွယ်ပါနဲ့ လွတ်လပ်စွာ လေ့လါပါ ဆန်းစစ်ပါ ဘာသာပြောင်းတိုင်း လူမျိုးမပြောင်းနိုင်ပါ) (MYANMAR@BURMA) တိုင်းပြည်ရဲ့နာမည်-အလံပြောင်းတိုင်း တိုင်းပြည်ပြောင်းမသွားပါဘူးကွာ။
အရီးကြီးခေတ်ဆိုတာ ရှိခဲ့တဲ့အတွက် ငါကိုယ်တိုင်မျိုးမစစ်ပေမဲ့ လူစစ်ဖို့ လူပီသဖို့တော့လိုတယ် အမြဲဆန်းစစ်နေတယ်ကွာ၊ တို့ကတာဝန်အရဆိုတဲ့စကား မင်းမိသားစုအတွက်ပါ တိုင်းပြည်အတွက် မဟုက်ပါဘူး ပြန်ဆန်းစစ်ပါအုံးကွာ။ မင်းကောလူသားတွေအတွက် သွားကြားထိုးတံ တန်ဘိုးလောက် လုပ်ပြီးပြီလါး၊ တိုင်းပြည်ဖျက်မဲ့ ငါကဘာကောင် ဘာရာထူးကွ၊ ငါကပါတီခေါင်းဆောင်ကွ၊ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကွ ဆိုတဲ့ဝေလေလေ စုန်းပြူးတွေဖယ်ရှားပြီး လက်တွဲကြပါ၊ ကောလဟာလနဲ့ အာချောင်မယ်ဆို ဝေးဝေးနေပေးပါ၊ မင်းကတကယ်ဘဲ တာဝန်အရဘဲဖြစ်ဖြစ် မျိုးချစ်စိက်နဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ် တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ လုပ်မယ်ဆိုရင် (ရှေ့ကသွားရင်အီးမပေါက်နဲ့ နောက်ကလိုက်ရင် ဖိနပ်မနင်းနဲ့ကွာ အရမ်းစိက်ဆိုးတယ်) ငါတို့နိင်ငံက ကမ္ဘာမှာအရမ်းနောက်ကြနေပြီ အချိန်မရှိပါ။ ငါဒို့ဗိုလ်ချုပ်လည်း ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေး အတွက် နည်းမျိုးစုံနဲ့ သခင်လို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂလိပ်တို့၊မုဒိန်းကောင်လို့ခေါ်တဲ့ ဂျပန်တို့နဲ့ပေါင်းရတာကို နားမလည်တဲ့ မျက်နှာရှုးစုန်းပြူးတွေရဲ့အပြစ်ပြောခံခဲ့ရပါတယ်။ ဗမာပြည်မှာ ငါအလုပ်မလုပ်ပါဘူး ငါ့ကုမ္မဏီကနိုင်ငံခြားမှာပါ၊ မျိုးချစ်စိက်ရှိရင် မင်းရဲ့လက်လိုပါတယ်။ ခေါ်တောကုလါးဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရခီးဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘာကောင်ဘဲဖြစ်ဖြစ် ဦးတည်ချက်လမ်းပေါ်မှာ အသေအလဲ အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာ
ကောလဟာလနဲ့ အာချောင်မယ်ဆို ဗိုလ်ချုပ်ပြောသလို ဖါနိင်ငံ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်
JJ (CLUB) နားမှာနေပါတယ်……… လူသားအကျိူးပြုဂီတဥယျာဉ် (၀၉၅၀ ၈၂၈၀၈) တာမွေလူမိုက်ကြီး ၀င်းကိုလှိုင်
SkyHeart WinKo ရေ ရခီးဆိုတဲ့စကားကိုပြန်ရုတ်သိမ်းပေးပါ။ ရခိုင်လူမျိုးတွေအသည်းခိုက်အောင်နာတဲ့စကားမို့လို့ပါ။
please, ဝေးလွင့်တိမ်ညီလေးရေ နာရမည့်နေရာလွဲနေပါတယ် သေချာလေ့လါကြည့်ပါကွာ။
ကပ်ဖား(ရဲအောင်လံဂိတ်မှူးပါ) ………………………………………………………………………………….. ကျုပ်တို့ ဦးပါလေရာကြီးကို ထိခိုက်စေတဲ့အတွက် ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်သည်။